တရားနာပုဂ္ဂိုလ် လေးမျိုး | မေတ္တာရိပ်
← ၀ိပဿနာ အားထုတ်သင့်ကြောင်း
၀ိပဿနာ သုံးမျိုး →
တရားနာပုဂ္ဂိုလ် လေးမျိုး	Posted on October 25, 2009	by mettayate ဗုဒ္ဓက အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်၊ တိကနိပါတ်၊ အ၀ဂုဇ္ဇသုတ်မှာ တရားနာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ၃ မျိုး
၁) ဤလောက၌ အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ကျောင်းသို့ မပြတ်သွား၍ တရားနာ၏။ သို့သော တရားနာနေစဉ် တရားတော်၏ အစ အလယ် အဆုံး သုံးပါးလုံးကို ကောင်းစွာ နှလုံးမသွင်း။ ထိုသူသည် မှောက်ထားသော အိုးနှင့်တူ၏။
၂) အချို့သော ပုဂ္ဂိုလသ်ည နာနေစဉ်၌သာလျှင် ကောင်းစွာ နှလုံးသွင်း၏။ တရားနာရာမှ ထသွားသော အခါ၌ကား ကောင်းစွာနှလုံးမသွင်း။ ဥပမာ ယောကျာ်းတစ်ယောက်၏ ခါးပိုက်ထဲ၌ ထည့်ထားသောစားဖွယ်တို့သည် ထိုယောကျာ်းအမှတ်တမဲ့နေရာမှ ထလိုက်မိပါက ဖရိုဖရဲ ပြန့်ကျဲသွားကုန်သကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ ဤပုဂ္ဂိုလ်သည် ခါးပိုက်နှင့်တူ၏။
၃) အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကား တရားတော်ကို နာကြားနေစဉ်၌လည်းကောင်း နာကြားအပ်သောတရားတော်၏ အစ အလယ် အဆုံးသုံးပါးလုံးကို ကောင်းစွာ နှလုံးသွင်း၏။ ထိုသူသည် လှန်ထားသော အိုးနှင့်တူ၏။ သွန်းလောင်းအပ်သောရေသည် ဘေးသို့မလျှောဘဲ အိုးထဲသို့ ကောင်းစွာတည်သကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ ဤပုဂ္ဂိုလ်သည် ကြီးသော ပညာရှိသူဖြစ်၏။
ပုဂ္ဂိုလ် ၄ မျိုး
ဥဂ္ဃဋိတညူ – တရားအကျဉ်းနာရုံနှင့် မဂ်ဖိုလ်ရတဲ့သူ၊
၀ိပဉ္စတညူ – တရားအကျယ်ဟောမှ မဂ်ဖိုလ်ရသူ၊
နေယျ – နာရုံနဲ့ မရ၊ ကျင့်မှသာ မဂ်ဖိုလ်ရသူ၊ (သုဒ္ဓ၀ိပဿနာ နဲ့ အသင့်တော်ဆုံး)
ပဒပရမ – ဒီဘ၀မှာ ဘယ်လိုမှ တရားမရနိုင်တဲ့သူ။
ယခုခေတ်မှာတော့ နေယျပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ပဒပရမ ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ ရှိတော့တယ်လို့ လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးက မိန့်တော်မူပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ယခုခေတ်မှာတော့ နေယျပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးကတော့ သုဒ္ဓ၀ိပဿနာ ပါပဲ။ ဒါကို ဗုဒ္ဓကိုယ်တွေ့အရ
ဘဂ၀ါ ဥဂ္ဃဋိတညူဿ ပုဂ္ဂလဿသမထံ
ဥပဒိဿတိ၊ နေယျဿဝိ ၀ိပဿနံ၊ သမထ၀ိပဿနံ ၀ိပဉ္စတညူဿ။
မြတ်စွာဘုရားသည် ဥဂ္ဃဋိတညူပုဂ္ဂိုလ်အား ဈာန်သမထတရားကို ညွှန်တော်မူ၏။
နေယျပုဂ္ဂိုလ်အား ၀ိပဿနာတရားကို ညွှန်ပြတော်မူ၏
၀ိပဉ္စတညူပုဂ္ဂိုလ်အား ဈာန်သမထနှင့် ၀ိပဿနာတရားကို ညွှန်ပြတော်မူ၏။
နေယျ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ သစ္စာလေးပါးသိအောင် မဂ်ဖိုလ်ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ဗုဒ္ဓဟောထားတဲ့အတိုင်း (ပုဂ္ဂလပညတ် ပါဠိတော် ၁၄၇ မှာ) –
ကတမောစ ပုဂ္ဂလောနေယျော ယဿပုဂ္ဂလဿ ဥဒ္ဒေသတော၊ ပရိပုစ္ဆတော၊ ယောနိသော မနသိကရောတော ကလျာဏမိတ္တေ သေ၀တောဘဇတော ပယိရူပါသတော ဧ၀ံအနုပုဗ္ဗေ န ဓမ္မာဘိသမယော ဟောတိအယံဝုစ္စတိပုဂ္ဂလောနေယျော။
ဥဒ္ဒေသတော့၊ ကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုင်ရာ ပါဠိကိုသင်ယူလျှက်
ပရိပုစ္ဆတော အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို မေးမြန်းလျက်
မနသိကရောတော သင့်လျော်စွာ နှလုံးသွင်းလျှက်
ကလျာဏမိတ္တေ ညွှန်ပြဆုံးမနိုင်သော မိတ်ဆွေကောင်း တို့ကို
ဓမ္မာဘိသမယော သစ္စာလေးပါးတရားကို သိမြင်ခြင်းသည်
နေယျပုဂ္ဂိုလ်ဟာ မဂ်ဖိုလ်ရချင်ရင် တရားနာဖို့က ပထမ၊ တရားအားထုတ်ဖို့က ဒုတိယလို့ မှတ်ထားရမယ်။
အညွှန်း- အရှင်ဇ၀န (မေတ္တာရှင်- ရွှေပြည်သာ) ရေးသားတော်မူသော လူငယ်များအတွက် ဂမ္ဘီရ၀ိပဿနာ အတွဲ ၁ နှင့်၂ စာအုပ်၊ မဂ်တားဖိုလ်တားအန္တရာယ်များစာအုပ်။
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← ၀ိပဿနာ အားထုတ်သင့်ကြောင်း